ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: အိမ်အပြန်လမ်း …
ကျွန်မအလုပ်ကပြန်ချိန်မှာ ကားမှတ်တိုင်မှ လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီး စိတ်အလိုမကျစွာ ရေရွတ်မိချင်းဖြစ်လေသည်။ဒီလောက်ထိလူများ နေလျှင်တော့ ဘတ်(စ်)ကားသည် လွယ်လွယ်နှင့်ရမည်မဟုတ်။ အောက်ဆိုဒ်ကားစီးရအောင်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ မဖြစ် ပိုက်ဆံလဲ အောက်ဆိုဒ်နေလေပြီ။ ဟူး..မတတ်နိုင် ရသည့်လိုင်းကားကို သူနိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင်ကျဲရတော့မည်။ ကဲ အသင့်သာပြင်ထားပေတော့လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ထဲမှာတေးရင် သူမအသင့်အနေအထားပြင်လိုက်သည်။ ကျွန်မတို့ဘ၀တွေက မွေးကထဲက taxi ဖက်မွေးလာတာမဟုတ်။ကိုယ်ပိုင်ကားအိမ်မက်ထဲတောင်မပါ။ လိုင်းကား ရင်းနှီးပြီးသား။ ခြေတစ်ဖက် လက်တစ်ဖက်မိ စပါယ်ယာက ဆွဲ ဆရာရေ့ဆို အလိုက်သင့်လေး..ဒီလိုအတတ်တော့ ကျွန်မတို့ဘ၀တွေက ကျွမ်းကျင်ပြီးသား။ သင်စရာမလို။ဒီတော့တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလို ကျွန်မလဲ မှတ်တိုင်မှာလာရပ်သော လိုင်းကားပေါ် လွှားကနဲတတ်ပြီးသား
ကားပေါ်ဘယ်လိုရောက်လာသည်မသိ။ စပါယ်ယာပဲလား နောက်ကလူအုပ်ပဲလားမသိ.ကားပေါ်သို့ရောက်လေပြီ။ဘာပဲ
ဖြစ်ဖြစ်ကားပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ နေရာကျအောင်တော့ နေရအုန်းမည်။ ဒါကလဲ လိုင်းကားစီးနေကျလူမှ အထာနပ်သည်လေ။ ဘေးကို တစ်ဖက်တစ်ချက်ကြည့် ကိုယ့်ရပ်နေတဲ့နေရာက အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား.. အားလုံးအိုကေ ..ဒီတော့မှ လက်ထဲက ထမင်းချိုင့်လေးကိုင်ပေးမယ့် ကယ်တင်ရှင်လိုက်ရှာရတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ငါးပိသိပ်သလို ထိုးထည့်ထားသောဤလိုင်းကားပေါ်၌ လက်တစ်ဖက်ထဲကိုင်ထားလျှင် အခြေအနေမဟန်။ နှစ်ဖက်လုံးဆွဲပြီး တောင့်ထားနိုင်မှအနေအထားက အိုကေမှာစိုပြေမည်လေ။ ကျွန်မကံဆိုးသလားပဲ ထမင်းချိုင့်ကိုင်ပေးမယ့်သူမရှိ။ ကယ်တင်ရှင်မတွေ့သေပြီဆရာပဲ ပြီးတော့ကျွန်မရပ်နေသည့်နေရာက ဘတ်(စ်) ကားထဲလေးတန်းလိုင်းထဲမှာ ကျွန်မက အလယ်တန်းကဖြစ်နေသည်။ အလိုလေး ထွက်တဲ့သူ ၀င်တဲ့သူ ကျွန်မအတိုးခံရတော့မည်။ဒီလိုနဲ့ အလိုမကျတဲ့မျက်နှာ ဒေါသတွေခုန်ပေါက်ြ့ပီး ထွက် ချွေးတစ်လုံးလုံး ဒီကြားထဲဘေးနားမှ နောက်မှရောက်လာသော လူ၏တိုက်ကွက်များကိုလဲ ရှောင်နေတိမ်းနေရသေးသည်။ကြာတော့ ကျွန်မဒေါသတို့က အတားအဆီးမဲ့စွာပဲ။
(ခင်ထား) ဒီမှာ ရှင်ကျွန်မဘေးမှာမတ်တပ်ရပ်မှာလား နောက်ကိုမရောက်ရောက်အောင်တိုးမှာလား တိုးမယ်ဆိုလဲ
နောက်ကိုရွှေ့ ကျောခိုင်းပြီးရွှေ့နော် ကိုးလန့်ကန့်လန့် လာပြီးလုပ်မနေနဲ့။ အလုပ်ပင်ပန်းရတဲ့ကြားထဲမှ ဘုကြည့်လာ
(ထိုလူ)ခင်ဗျားကလဲဗျာ လူကြပ်နေတာပဲ ဒီလောက်တော့သည်းခံမှပေါ့။
(ခင်ထား) ဒီမှာ ကျွန်မမွေးကထဲက လိုင်းကားစီးလာတာ လူတိုးတာလား..ကားကြပ်တာလား ကျွန်မခွဲခြားနိုင်တယ်။
ဒီလိုဆိုတော့လဲ သကောင့်သား နောက်ကိုရွှေ့သွား၏။ဟူးတစ်ရန်အေးပြီး။စိတ်အေးလို့မှမကြာသေး အပေါ်တန်းကိုကိုင်ထားသော သူမလက်များကို ခဏခဏလာလာထိနေသလိုနှင့် ခဏခဏလာလာကိုင်နေ၏။ ဘယ်သူ့လက်မှန်းမသိ.ဒီလက်ကိုလဲ လွှတ်လိုက်လို့မရ ဒါမှမကိုင်ထားရင် စကောထဲ ဇီးဖြူသည့်လိမ့်သည့်အလား။ဒါနှင့်လူကြပ်နေသည့် ကြားထဲသူမတရားခံအရှာ ထွက်ရ၏။ တွေ့ပြီး ရှပ်အင်ကျီ အပြာရောင်ဝတ်ထားသော တစ်ယောက်။ လက်ကိုရသည့်နေရာလိုက်ပြီးရွှေ့ကြည့်၏။ သေချာအောင်.. ၄င်းလက်လဲ လိုက်လာပြန်၏။ ဒီတော့ ထွက်သည့် ဒေါသမနေနိုင်စွာနှင့်
(ခင်ထား) ဟဲ့ ဟိုအကောင် လက်ကိုင်ရတဲ့ အရသာက တော်တော်ကောင်းနေလို့လား။
(ထိုသူ) မတော်လို့ထိမိတာပဲဗျာ ခင်ဗျားတို့ကလဲ လွန်တယ် အသားပဲ့ပါသွားတာမှတ်လို့။
ပြောသည့်ပုံက။ကောက်ရိုက်ချင်စရာ။တောက် ငါလေ ထမင်းဗူးနှင့် ကောက်ထုလိုက်ရလို့ကတော့ ကွဲရင်ကွဲ..မကွဲရင်ဖူးမှာတော့သေချာသည်။
(ခင်ထား) ဒီမှာ ငါစကားများများမပြောချင်ဘူး အေးလက်တော့ပါချင်နေတယ်။ နင်လက်ကို နင်ဆင်ခြင်လိုက်. အနေအထားက နင်ဆက်ပြီးမိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ကြည့်လိုက်..
သကောင့်သားက နဲနဲတော့ အကြောမာ၏။နေမြဲ။ ဘယ်ရမလဲ ဒါမျိုး..ခင်ထားတို့က လာထားဆိုပြီး ထမင်းချိုင့်က စတီးချိုင့်ဆိုတော့ ပိုအရသာရှိ၏ ကားကလဲအရှိန်နှင့် ဘရိတ်အနင်း ခင်ထားတို့လက်ကလဲ ကွက်တိ။ထိုသူ၏ ဒူခေါင်းနှင့်နှစ်ဆင့် ထမင်းချိုင့် တွေ့ပေးလိုက်၏။ ထိုသူလဲ အားကနဲ့ပဲ။အရသာရှိလိုက်သည်ဖြစ်ချင်း။
(ခင်ထား) မတော်လို့ ဆောရီး..
သူမ၏ ခပ်ထေ့ထေ့ တစ်ကယ်လုပ်မည့်ပုံကြောင့် ထိုသူဆက်ပြီး မထိတထိမလုပ်ရဲတော့…ဒီတော့ အ၀င်အထွက်တွေကို ကြိတ်မှိတ် တောင့်ခံသက်ပြင်းတွေ ဟူးကနဲဟူးကနဲ့ ချရင်း..ရှေ့မှတ်တိုင်ဆင်းရမည်ဆိုတော့တစ်မှတ်တိုင် ကြိုထွက်. ကားစပါယ်ယာ၏ အသံကနားထဲစူးကနဲ။
(စပါယ်ယာ) ဒီမှာ ဟိုအစ်မကြီး အပေါက်ဝမှာ ပိတ်မရပ်နဲ့လေ ဆင်းကာနီးကြမှ ထွက်ပါဗျ။ ကျုပ်တို့က ဒီအပေါက်တစ်
ပေါက်ထဲနဲ့ လုပ်စားနေရတာ။ ခင်ဗျားတို့က..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ခင်ထား) ဟဲ့ ငါရှေ့တစ်မှတ်တိုင်ဆင်းမှာ။ ဆင်းလို့ကြာလဲနင်တို့ပဲ..တက်တက်ဆင်းဆင်းနဲ့ ခုကြိုထွက်လဲနင့်ကားလဲ ထွက်နေပါပြီ လူမှမတင်တော့တာ.ဘာလို့ လူကြားထဲငါ့လာအော်ဟစ်နေရတာလဲ။
(စပါယ်ယာ)ခင်ဗျားထွက်လာတော့ အပေါက်ပိတ်သွားတာပေါ့ လူတင်လို့ဘယ်ရတော့မလဲဗျxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
စပါယ်ယာသည် စကားတို့မရပ်သေး ပြောတုန်း။ ကျွန်မလဲ ကားကလဲ မှတ်တိုင်မှာအရပ်ဆိုတော့ ကွယ်နေသည့် စပါယ်ယာအား တွန်းကာဖြင့် ကားအောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်။ ကားကလဲ အရှိန်မသေသေးဆိုတော့ စပါယ်ယာသည် ကားအောက်သို့ ဖင်ထိုင်ရက် ဘုတ်ခနဲပြုတ်ကျ၏။စပါယ်ယာလဲ အသားနာသွားပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းတော့၏။
ဒီတော့ စပါယ်ယာက ဒေါသတကြီး.. ခင်ဗျားမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ဆိုပဲ
(ခင်ထား)မိန်းကလေးဖြစ်လဲရတယ်။ အေးနင်စပါယ်ယာ အေးအေးဆေးဆေး ဆက်လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် နင်ထွက်သွားတော့ နင့်ထမင်းအိုး ငါတုတ်နဲ့ မထိုးချင်ဘူး။
ကျွန်မလဲ ဒေါသတို့က အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ပြီလေ။ကျွန်မ၏ သွေးအေးအေးပြန်ပြောလိုက်ပြီး စူးရဲသော မျက်ဝန်းတို့ကြောင့် စပါယ်ယာလဲ ကားပေါ်ပြန်တက်က ထွက်သွား၏။တော်သေးသည် ပြုတ်ကျတုန်းက ကားအရှိန်က နဲနေလို့သာဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်.. သူမနေရင်းထိုင်ရင်း ပြသနာတက်အုန်းမည်။ဟူး ဒေါသ ဒေါသ..
သူမသက်ပြင်း ..ဟူးကနဲ့ တစ်ချက်ထပ်မှုတ်ထုတ်ရင်း မှတ်တိုင်မှ အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့လေသည်။
ဒီတော့မှ ကျွန်မလဲသတိထားမိ၏။နောက်သို့လိုက်လာသော ခြေသံ။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အလုပ်ကင်တင်းမှာ ကျွန်မကို ခိုးကြည့်နေကြတစ်ယောက်။ သေရော..သေရော.သွားပြီး။ခုနက ဒေါသတို့က ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် အတွေးနဲ့တင် ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ ရှက်နေတာလား.ကြောက်နေတာလား ဘာမှန်းမသိ။ကျွန်မလဲ စိတ်ဝင်စားသည်လေသူ့ကိုခုတော့ ဒွတ်ခ။
သူစကားပြောဖို့လိုက်လာတာဖြစ်မည်။ကျွန်မက ကားပေါ်မှာအတော်လေးပွဲကြမ်းသွား၏။ တောက်..သေတာ သေလိုက်ချင်တော့တာပဲ ခင်ထားရယ်။သူကတော့ စိုးရွံနေပုံရ၏။ခုမှတော့ ပေါက်တဲ့နဖူးမထူးပြီ။
ကိုယ်ကစလိုက်မှကောင်းမည်။မျက်မှန်းလဲ တမ်းမိပြီးသားဆိုတော့.. သူမနောက်သို့ပြန်လှည့်လိုက်ပြီး..
(ခင်ထား) ဒီမှာ.. ဒီမှာ
စကားမဆုံးသေး ထိုလူသည် ဖနောင့်နှင့်တင်ပါးတစ်သားထဲကျအောင်များ ပြေးသလားထင်ရသည်။
မြန်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်း။လှည့်တောင်မကြည့် လစ်လေပြီ။ခပ်ဝေးဝေး..ဝေး နောက်ဆုံးအကြိမ် သက်ပြင်းကို ဟူး..ကနဲ မှုတ်ထုတ်
ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ရမည့် လမ်း ခေါင်းကိုမော့ ရင်ကိုကော့ ထီမထင်သည့်မျက်နှာနှင့် ..
ပုံလေးကိုတော့ Internet ကပဲယူသုံးထားတာပါရှင်။
ZT 22 August 2010 at 08:43
ငယ်ငယ်က မထသ ဘတ်စ်ကားမှာ ကားခေါင်မိုး ကြည့်ပြီး ဘေးကို မမြင်ရပဲ တစ်လမ်းလုံး စီးရတာ သွားသတိရတယ်။
ဒါနဲ့။ ပထမဆုံး စာကြောင်းကို အမြန်ဖတ်လိုက်တော့ ကျွတ်တွေကလည်း များလိုက်တာ ဆိုတော့ ရုတ်တရက် ကြောင်သွားတယ်။ :D
မြစ်ကျိုးအင်း 23 August 2010 at 01:31
ဘဝအမောကိုဖတ်ရင်း ကိုယ်ပါ မောသွားတုန်း
နောက်ဆုံးက အသော လေးနဲ့ ပိတ်လိုက်တော့ ရယ်ပြုံးပြုံး ဖြစ်ပြီး ကျန်နေခဲ့တော့တယ်။
စကားဝါတစ်ပွင့်ပေးပြီး ခရီးရှည်ကြီးထွက်သွားသူ (၂)
စကားဝါတစ်ပွင့်ပေးပြီး ခရီးရှည်ကြီးထွက်သွားသူ (၁)
Very little makes it more valuable...
“မြ နေကောင်းလား။ ကိုယ်သတိရတယ်။” ကျွန်မလဲ သတိရပါတယ် မောင် လို့ စိတ်ထဲကပဲ ဖြေလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ ဖုန်းထဲဝင်လာတဲ့ message...
အဲဒီတုန်းက ၇ တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီး ကျောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့။ အိမ်ကိုကျောင်းပိတ်ရက် အလည်လာနေတဲ့ အစ်မတစ်ဝမ်းကွဲရယ် ညီမလေးရယ် ကျွန်...
မနက်ဖြန်ချိန်းထားသည်ကို ဒီနေ့ည မင်းကြည် ကိုသွားပြောမှ ဖြစ်မည်။မအားသည့်အကြောင်း။ သူတို့နှစ်ဦး ချစ်သူ ဘ၀ရောက် ခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်နှစ်တိတိပြည်...
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၂)
(နုငယ်) တော်တော်နာနေသေးလားဟင်။ (ထွန်းသစ်) နာနေသေးတာပေါ့ဟ။ နင်က လုပ်လိုက်ရင် တစ်ဇောက်ကန်းကြီးပဲ။ နုငယ် ထွန်းသစ်ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်လှမ...
“သက်နောင် ငါ အရမ်းလွမ်းနေပြီ..” နားထဲကြားလိုက်ရသည့် အသံက တစ်ကယ့်ကို တိုးတိုးညင်သာ။ နှလုံးသားထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခပ်တု...